Anaga waxaa soo booqaneynaa meesha aad ku nooshahay, oo guriga HVB, sidaa uga warhelno xaalada | IVO.se
Ku: Carruurta iyo dhallinyarada cid lala dejiyo
Haddaad deggan tahay HVB
Haddaad la deggan tahay qoys kale
Haddaad deggan tahay guryaha dhallinta 16-20 sano jira
Kormeerada aan sameynno
Haddaad deggan tahay HVB ama hoy gaar ah ee dhallinyaro
Waxaannu booqaneynaa gurigaaga taakuleynta si aannu u aragno sida uu u shaqeynayo
Kormeerka daryeelka iyo xannaanada (IVO)
Warbixin dheeraad ah oo laga helo kuwo kale
Anaga waxaa soo booqaneynaa meesha aad ku nooshahay, oo guriga HVB, sidaa uga warhelno xaalada
Adiga oo ku nool guriga daryeelka ama dhallinyarada (HVB) waxaa la siin fursad aad nagu la hadlikartiin anaga oo Hey’adda kormeerida daryeelka iyo kaalmeenta, markaa booqosho kugu imaano guriga aad nooshahay.
Guryaha qaaska oo dhallinyarada waxey xitaa kamid yahiin HVB. Booqashada waxaa loogu magacaabaa kormeerid. Haddii aad dooneysid inaa nala hadashid waxaa u sii sheegikartaa shaqaalaha ama anaga markaa imaano. Haddii aad u baahantahay turjum anaga baa xalineyno.
Waayo aan u kormeereynaa guriga aad ku nooshahay?
Waxey ku qoran tahay sharciga in Hey’adda kormeerida daryeelka iyo kaalmeenta aan kormeerno guryaha HVB oo carruurta iyo dhallinyarada. Marmarka qaarkood shaqaalaha joogi guriyaha HVB weey og yihiin in aa imaaneeyno, marmarna waxaan imaana ayadoo cidna ogeeyn.
Kormeerida ma faa’iido bey leedahay?
Haa. Anaga waa hubinaa in guryaha HVB ey ku dhaqmaayaan sharciyada iyo xeerarka jiro. Waxaa ugu muhiimsan in ey helaan carruurta iyo dhallinyarada kalsooni iyo daryeel wanaagsan. Haddii aad uu aragto in ee wax qaldan yihiin ama uu baahan yihiin in la badan waxaad marka hore fikrada uula tageeysaa shaqaalaha joogi HVB ama xafiiska adeega bulshada. Hey’adda kormeerida daryeelka iyo kaalmeeynta tusaale ahaan ma badali karto cuntada meesha lagu cuno, inta hoowlo aad maalintii ku qabataan guriyada-HVB ama habka uu xafiiska adeega bulshada ku qiimeeynaayo baahida aad uu qabto daryeel. Laakin haddii aad dareensan tahay in aan lagu dhageeysaneeyn ama aad ku nabadqabin, waana la hadli kartaa inteena joogto Hey’adda kormeerida daryeelka iyo kaalmeenta.
Haddii aad tahay magangalyo doon oo aad qabto su’alooyin ku saabsan arintaada waxaad ula tageeysaa Hey’adda socdaalka. Hey’adda kormeerida daryeelka iyo kaalmeenta ma ka shaqeeyso arimaha magangalyada, mana saameeyn karto haddii lagu ogalaanaayo sharci aad ku joogto Iswiidhan.
Maxaa dhacaayo intuu kormeerida socdo?
Kormeerid kasto waxaan la kulana shaqaale ka shaqeeyo guriyaasha-HVB, caruurtana doonaayo in ee nala hadlaan weey nala hadli karaan markaas. Waxaan dooneeynaa in ogaano meesha haddii aad ka hesho, haddii shaqaalaha si fiican kuula dhaqmaan iyo in aad ku nabadqabto. Marmar baa wada hadalka adinka caruurta iyo dhallinyarada kala yeelankarnaa telefoonka markii kormeerida aan dhameyno kadib. Marmar baa dhicikartaa inaa anaga u baahanahay inaa la hadalno shaqaalaha guriga HVB ama xafiska adeega bulshada oo kala hadalno warbixinta ka soo baxday wada hadalka.
Maxaa dhacaayo kadib?
Markaas kadib waxaa qoreynaa go’aan aan ku qiimeyno guriga HVB – haddii ey jiran wax aan anag dooneyno iney shaqaalaha wax ka badalaan. Go’aanka waa sidii warbixin camal, oo waxaa ku jireyso warbixin kooban oo ku saabsan waxyaabihii adinka carruurta iyo dhallinyarada aad tiraahdeen – laakin kuma qornaaneyso qofkii jiri. Adiga waxaa xaq u leedahay inaa ka qeyb-qaadatid waxa ku qoran go’aanka. Weeydii shaqaalaha gurigaada ama ka raadi liiska guryaha HVB.
Markaa aad doonto nala soo xiriir
Haddii aad dooneysid inaa anaga oo IVO la hadashid intaan imaan ama markaa ku soo booqano kadib adiga waa na soo wixi kartaa ama e-mail baa u soo diri kartaa dadkii ku soo booqday midkood. Shaqaalaha weey haayaan xitaa anaga telefoonkeena iyo ciwaankeena. Sido kale waxaad la xariiri kartaa leeyna caruurta iyo dhalinyarada markii aad qabto su’aalo ku saabsan xuquuqdaada ama aad dooneeysid in aad ka waramto waxyaalaha aan si fiican ugu kala socon dhanka xafiiska adeega bulshada ama daryeelka caafimaadka iyo bukaanka.
Kormeerka daryeelka iyo xannaanada dhallaanka deggan HVB iyo Guryaha lagu kaalmeeyo
Laamaha warbaahinta bulshada
Xiriirka boggaga kale